တီဘီရောဂါ ၏ အတိုကောက်စာလုံး သည် မိုက်ကိုဘက်တီးရီးယား ရောဂါပိ
ⓘ တီဘီရောဂါ ၏ အတိုကောက်စာလုံး သည် မိုက်ကိုဘက်တီးရီးယား ရောဂါပိုးအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး သာမန်နှင့် ရံဖန်ရံခါ သေစေလောက်သည့် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်သည် ..
ရှားလော့ခ်ဟုမ်း သည် ဆာ အာသာ ကိုနန် ဒွိုင်း ဖန်တီးထားသော စုံထောက်ဝတ္ထုထဲမှာ ဇာတ်ကောင် တစ်ကောင် ဖြစ်သည်။ စုံထောက် ဦးစံရှား ဝတ္ထုအများစု၏ အခြေခံဝတ္ထုများကား အင်္ဂလိပ်စာပေတွင် ထင်ရှားသော ရှားလော့ဟုမ်း ဝတ္ထုများ ဖြစ်၏။ ယင်းရှားလော့ဟုမ်းဝတ္ထုများကို ဖန်တီးသူမှာ ဆာအာသာ ကိုနင်ဒွိုင်း ဖြစ်သည်။ ကိုနင်ဒွိုင်းသည် အိုင်းရစ် အမျိုးသားအဆက်အနွယ်ဖြစ်သည်။ ၁၈၉၅ မေ ၂၂ တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အီဒင်ဘာရာမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဆေးပညာကို သင်ယူစေခဲ့ကာမူ အက်ဂါလင်ပိုး၊ ဝီလကီကောလင်း၊ ဂါဗရီယို စသော စုံထောက်ဝတ္ထုရေးဆရာများ၏ ဝတ္ထုများကို ဖတ်ပြီး စာပေ၌ စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ၁၈၈၁တွင် ကိုနင်ဒွိုင်းသည် ဆောက်ဆီး၌ဆရာဝန်အဖြစ် အသက်မွေး ...
တီဘီရောဂါ ၏ အတိုကောက်စာလုံး) သည် မိုက်ကိုဘက်တီးရီးယား ရောဂါပိုးအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး သာမန်နှင့် ရံဖန်ရံခါ သေစေလောက်သည့် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်သည်။ လူတို့တွင် မိုက်ကိုဘက်တီးရီးယမ်း ကျူဘာကလို့ဆစ် ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်ရသည်။ အဆုတ်နာရောဂါသည် များသောအားဖြင့် အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေသော်လည်း အခြားသော ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ရောဂါရှိသည်သူ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်း သို့မဟုတ် တံတွေးထွေးခြင်း ပြုလုပ်သည့်အခါ ရောဂါပိုးသည် လေထဲမှတဆင့် ပျံ့လွင့်သွားသည်။ လူတွင်ရောဂါပိုးကူးစက်သည့်အခါ ရောဂါ လက္ခဏာမပြဘဲ ငုပ်နေတတ်ပြီး ၎င်း ရောဂါပိုးငုပ်နေသူ ဆယ်ယောက်တွင် တစ်ယောက်သာ အဆုတ်နာရောဂါ တိုးတက်ဖြစ်ပွားလာသည်။ အကယ်၍ ရောဂါထသည်ကို မကုသဘဲ နေမည်ဆိုပါက ရောဂါဖြစ်သူ ၅၀% ထက်ပို၍ သေစေနိုင်သည်။
ရေဒီယိုရောင်ခြည်နည်းပညာ သာမန်အားဖြင့် ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သောအရည်များကို ရောဂါပိုးမွေးခြင်း တို့အပေါ်တွင်လည်း မူတည်သည်။ ကုသရာတွင် ခက်ခဲပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပဋိဇီဝဆေးများစွာ တိုက်ကျွေးရန် လိုအပ်သည်။ ရောဂါရှိသူနှင့် ထိတွေ့ထားသူသည် ဆေးစစ်ရန်နှင့် အကယ်၍ လိုအပ်ပါက ကုသမှုခံယူရမည် ဖြစ်သည်။ ပဋိဇီဝဆေးကို ခံနိုင်ရည်ရှိလာသော ကျယ်ပြန့်စွာဆေးမျိုးစုံ မတိုးသည့် ဆေးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါ multiple drug-resistant tuberculosis; အတိုကောက် MDR-TBသည် တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာသည့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောဂါကာကွယ်ခြင်းသည် ကြိုတင်ဆေးစစ်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းတို့ အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အထူးသဖြင့် အသုံးများသည်မှာ bacillus Calmette-Guérin ဟုခေါ်သော ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။
တီဘီရောဂါသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ မည့်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို ကူးစက်ဖြစ်ပွားစေနိုင်သော်လည်း အဆုတ်တွင်ဖြစ်ပွားမှုမှာ အများဆုံးဖြစ်သည် အဆုတ်တီဘီရောဂါ; pulmonary tuberculosis ဟု ခေါ်ကြသည်။ အဆုတ်ပြင်ပတီဘီရောဂါသည် အဆုတ်ပြင်ပ အခြားသော အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများတွင် ဖြစ်ပွားပြီး၊ အဆုတ်ပြင်ပတီဘီသည် အဆုတ်တီဘီရောဂါနှင့် တွဲ၍လည်း ဖြစ်ပွားတတ်သည်။
2.1. ရောဂါသွင်ပြင်နှင့်လက္ခဏာများ အဆုတ်တီဘီ
တီဘီရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားပါက အဆုတ်တွင်ပါဖြစ်ပွားမှုမှာ ၉၀% ခန့်ရှိသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများတွင် ရင်ဘတ်နာခြင်းနှင့် ရက်ရှည်ချောင်းဆိုးပြီး သလိပ်ထွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ၂၅% ခန့်မှာ ရောဂါလက္ခဏာမပြတတ်ပေ။ ရံဖန်ရံခါ ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပြီး၊ ရှားပါးဖြစ်စဉ်အချို့တွင် အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောကို ကူးစက်ထိပါးစေကာ အပြင်းအထန်သွေးယိုစီးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တီဘီရောဂါသည် နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်လာကာ အဆုတ်၏ အပေါ်ခြမ်းတွင် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကြီးကြီးမားမားရစေနိုင်သည်။ အဆုတ်အပေါ်ဖက်ပိုင်းသည် အောက်ပိုင်းထက် တီဘီရောဂါကြောင့် ပိုထိခိုက်စေပြီး အကြောင်းရင်းကို တိတိကျကျမသိရသေးပေ။
2.2. ရောဂါသွင်ပြင်နှင့်လက္ခဏာများ အဆုတ်ပြင်ပတီဘီ
3.1. ဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းရင်း မိုက်ကိုဘက်တီးရီးယား
3.2. ဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းရင်း ရောဂါဖြစ်စေရန် အားပေးသောအချက်များ
ရောဂါဖြစ်သူနှင့် ကြာရှည်စွာထိတွေ့သူ၊ မကြာခဏထိတွေ့သူနှင့် လက်ပွန်းတတီးထိတွေ့သူများသည် ရောဂါကူးစက်ခံရမှုမြင့်မားတတ်ပြီး ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းသည် ၂၂% ရှိသည်။ ရောဂါဖြစ်နေပြီးဆေးမကုသူတစ်ဦးသည် တစ်နှစ်လျှင် ၁၀–၁၅ ယောက်အထိ အခြားသူများအား ရောဂါကူးစက်စေနိုင်သည်။ ကူးစက်ခံရမှုသည် ရောဂါရရှိနေသူ ရောဂါငုပ်လျှိုးနေသူမဟုတ်ထံမှ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ တစ်ယောက်မှ အခြားတစ်ယောက် ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ဖြစ်နိုင်စွမ်းမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားနေသူမှ ပိုးမွှားပေါင်း မည်မျှလေထဲသို့ လွှင့်ထုတ်ပေးနိုင်သည်၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည် မကောင်းသည်၊ မည်မျှကြာအောင် ရောဂါပိုးမွှားနှင့် ထိတွေ့နေရသည်နှင့် တီဘီရောဂါပိုး၏ ပြင်းအားတို့ အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရောဂါဖြစ်သူလူနာအား သီးခြားခွဲခြားထားခြင်းနှင့် ထိရောက်သည့် တီဘီကုသဆေးများ တိုက်ကျွေးခြင်းတို့ဖြင့် ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ကွင်းဆက်ကို ဖြတ်တောက်နိုင်ပါသည်။ ဆေးမယဉ်ပါးသေးသည့် တီဘီရောဂါရှိသူအား နှစ်ပတ်ကြာ ဆေးကုသပြီးပါက ထိုရောဂါရှိသူသည် လေထဲမှ ကူးစက်နိုင်သည့် အဆင့်မှ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့မှ ရောဂါကူးစက်နိုင်သည့်အဆင့်သို့ လျော့ကျသွားသည်။ အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်သို့ ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားလာပါက အနည်းဆုံး ၂၁ ရက် သို့မဟုတ် သုံးပတ်မှလေးပတ်အထိ မတိုင်ခင် ထိုသူမှ အခြားသူများသို့ ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ နွားများတွင် မိုင်ကိုဘက်တီးရီးယား ဘိုးဗစ်ရောဂါပိုးကြောင့် တီဘီရောဂါဖြစ်သည့် နွားသား/အမဲသားများကို စားမိပါက တီဘီရောဂါ ရရှိနိုင်စေပါသည်။